कोरोना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा कुनै समस्या छ ? मलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोस् : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद्) गगनकुमार थापाले कोरोना प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै ‘होम आइसोलेसन सेवा’ शुरु गरेका छन्।
होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श लिन चाहेमा मोबाइल नम्बर ९८६०३४०५८७ मा एसएमएस गर्न थापाले अनुरोध गरेका छन्। आइतबारबाट शुरु भएको ‘होम आइसोलेशन सेवा’ के हो? कस्तो हो? यो सेवा क–कसलाई उपलब्ध हुन्छ? र, अबको योजना के छ भन्ने सन्दर्भमा स्वदेश नेपालले नेता थापासँग गरेको कुराकानीः
–हामीले अहिले हेल्थ एट होम संस्थासँग मिलेर होम आइसोलेसन सर्भिस हो। अरु ठाउँजस्तै हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा यहाँका नागरिक संक्रमित हुनुहुन्छ। संक्रमित हुने व्यक्तिहरूमध्ये संक्रमणको पहिचान कतिपयले स्थानीय सरकारले तोकेको स्थानमा गएर गर्नुहुन्छ। कतिले अस्पतालहरूमा गएर थाहा पाउनुहुन्छ। संक्रमण भएको थाहा पाएपछि कपियत व्यक्ति घरमै बस्नुहुन्छ, जुन आवश्यक पनि छ।
घरमै आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा समयमै स्वास्थ्यको परामर्श पुर्‍याउन सकियो भने अनावश्यक रुपमा अस्पताल जाने अवस्था बन्दैन। जसले गर्दा अस्पतालमा पुगेको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका बिरामीको उपचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कसै–कसैलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, परामर्श नपाउँदा उहाँहरू घरमै विविध खालको उपाय अपनाएर बस्नुहुन्छ। जसलाई अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने हो, उहाँहरूलाई अस्पताल पुग्नुहोस्। र, जसलाई घरमै परामर्श सेवा दिएर उपचार गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई घरमै आवश्यक व्यवस्था गर्न सकियोस्।
घरभित्रै बसेर कोरोनाको संक्रमण मुक्त हुने कुरामा चिकित्सकीय परामर्शबाहेक अरु कुरामा पनि सहज बनाउन सकियोस्। होम आइसोलेसनमा बसेकालाई पनि परामर्श दिएर सकेसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कुराको अभ्यास संसारका विभिन्न देशमा अभियानकै रुपमा छन्। संघीय सरकारले, स्थानीय सरकारले यस्ता अभ्यासहरू गरिरहेका छन्। तर, संक्रमितको संख्या धेरै भएको हुनाले र कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा परामर्श सेवा सहज रुपमा नपाइएको गुनासो छ। यही अभावलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हेल्थ एट होमसँग मिलेर ३ दिनदेखि यो अभियान शुरु गरेका हौं।
–हेल्थ एट होममा व्यावसायिक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली उपलब्ध छ। एसएमएसमार्फत् आएको डाटालाई स्वयंसेवकहरूले हेल्थ एट होमको कार्यालयमा उपलब्ध चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। र, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमितहरूलाई तीन तहमा छुट्याउनुहुन्छ। जो, लक्षण छैन, सामान्य रुपमा आइसोलेसनमा मात्रै बस्नुभएको छ, समस्या छैन, उहाँहरू पहिलो तहमा पर्नुभयो।
दोश्रो– लक्षण छैन। तर, सेवा र परामर्श चाहिँ लिन्छु भन्ने खालका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र, तेश्रो चाहिँ केही लक्षणहरू देखिएको र केही समस्याहरू हुनसक्ने र सेवा लिन चाहनेहरू गरी तीन तहमा छुट्याएर उहाँहरूले सर्भिस शुरु गर्नुहुन्छ। परामर्श सेवा शुरु गरेपछि नियमित रुपमा परामर्श चाहिनेका लागि सोही अनुसार नियमित सेवा दिनुहुन्छ। आवश्यकताअनुसार जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुहुन्छ।
–छ। कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूमध्ये कसैलाई अक्सिजनको तह नाप्ने मेशिन चाहिएको हुनसक्छ। कसैले अक्सिजनकै आवश्यकता भएको हुनसक्छ। डाक्टरहरूको सल्लाहमा कसैलाई औषधि चाहिएको हुनसक्छ। तर, औषधि लिन नपाएको वा औषधि नपाइएको हुनसक्छ। उहाँहरूले जे आवश्यकता परेको हुन्छ, त्यो उपलब्ध गराउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। कसै–कसैले एकदम आत्तिएर चिकित्सकले घरमै आएर हेरिदिनुस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको हुन्छ।
र, त्यस्तो अपेक्षा गर्नेहरूलाई घरमै गएर आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिनु भएको छ। तीन जना त्यस्ता बिरामीको घरमा हाम्रो स्वास्थ्य टोलीका साथीहरू जानुभयो। अन्य कयौंले फोनमार्फत् परामर्श लिइरहनु भएको छ। हामीले होम आइसोलेसन सर्भिस शुरु गर्दैगर्दा कतिलाई अस्पतालको बेड चाहिएको हुन्छ। अस्पतालमा भर्ना हुन कोसिस गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो जानकारी आएपछि हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूको माध्यमबाट हामीसम्म त्यो सूचना आइपुग्छ। र, आइपुगेपछि हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्ने प्रयास गरेर अस्पताल भर्ना गराउने कोसिस गरिरहेका छौं।
–अघिल्लो पटकको कोरोना कहरकै बेलामै प्रत्येक घर–घरमा मास्क र अनुरोधपत्र पठाएको थिएँ, त्यहाँ पनि फोन नम्बर छोडेको थिएँ। नियमित रुपमा सांसद्को कार्यालयका साथीहरूलाई र मलाई सम्पर्क गर्ने क्रम त छँदैछ। अहिलेको हकमा ९८६०३४०५८७ (9860340587) मा कुनै किसिमको एसएमएस छोड्नुभयो भने स्वयंसेवक साथीहरूमार्फत् मलाई जानकारी आउँछ।
अरु कुनै विषयमा मसँग कुरा गर्नुपर्‍यो भने यही नम्बरमा एसएमएस गर्नु भए हुन्छ। त्यसपछि म आफै उहाँहरूलाई फोन गर्छु। एउटा एसएमएस मात्रै गर्नु भए पुग्छ। होम आइसोलेसनमा रहनुभएका र यो सेवा लिन इच्छुक काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–४ बासीले मोबाइल नम्बर ९८६०३४०५८७ मा आफ्नो नाम, ठेगाना, वडा र टोल खुल्ने गरी लेखेर एसएमएस गर्नुहुन अनुरोध छ।
बिरामी हुन् नचाहने हरेक नेपालीले हेर्ने पर्ने आजसम्मकै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अन्तर्वार्ता (भिडियो)